We She Me: နိုင်ငံပိုင် ဓန ရန်ပုံငွေ(SWF)
Kay - 6/25/08, 11:27 AM
ဟုတ်တယ်နော်..စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်.. ကမ္ဘာ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ ဈေးခင်းကြီးက.. ဘရိတ်အုပ် မရ တဲ့..ရထားကြီး တစင်းလို ဖြစ်နေ ပြီ ထင်ပါ့။
ဝေမျှတဲ့အတွက်.ကျေးဇူး.. မြတ်နိုး နဲ့မောင်လေး ကို.. Big Hug လို့။ သူမ ကိုလည်း နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
Anonymous - 6/28/08, 7:21 AM
FYI, an article to share ....
Andy Myint - 6/28/08, 6:03 PM
ဟုတ်တယ် မကေ။ ရှိပြီးသားတွေကလည်း ရှိပြီးရင် ရှိပေါ့။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလောကမှာ နိုင်ငံနဲ့ ချီပြီး ပါလာတော့ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်လာတယ်။
Dear Reader, thanks for the link. That's interesting.
ဘလူးဖီးနစ် - 6/30/08, 11:14 PM
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်ဗျာ။ အသေအချာကို ဖတ်သွားပါတယ်။ ကျေးဇူးပါပဲ အကိုရေ